Tsy tokony hampanoana ny “detox”. Ity atoro anao ity dia atao mandritra ny 3 herinandro. Tsy tokony hihinana smoothies sy ron-dasopy fotsiny akory ao anatiny. Tokony misakafo ara-dalana saingy tokony ny legioma sy voankazo no mandrafitra ny ampahany betsaka amin’ny sakafo. Ireo avy ny atao mba hahomby ny detox atao
°1 : Esorina ny sakafo mitondra poizina ao anaty rehetra : « charcuteries », hena mena, vokatra vita amin-dronono sy fraomazy, alikaola ary ny sakafo mamy rehetra toy ny « sodas » zava –pisotro mamy misy entona na tsia, tsindrin-tsakafo rehetra ary ny sakafo indositrialy rehetra
°2 : Omena vahana ny sakafo manta satria be otrikaina sy vitamina kokoa. Raha tsy maintsy andrahoina dia tsy ketrehina ela afa tsy ny lasopy legioma ihany.
°3 : Sakafo tiana no hohanina. Raha tsy tia navet na artisao dia tsy voatery hihinana azy na dia hoe manadio aza ireo legima ireo.
°4 : Mahay misafidy siramamy ela vao levona : Azonao atao ny mihinana vary mbola feno otrikaina (vary gasy), katsaka, voamaina toy ny lentilles sy tsaramaso…
°5 : Zava-maitso manitra sy episy ampiasaina hanomezana tsiro ny sakafo dia ahena kosa ny sira.
°6 : Fadiana ny sakafo be menaka sy ny karaza-menaka mampatavy. Tazony kosa ny karaza-menaka tsara toy ny zavoka, amandes… Menaka oliva sy colza ampiasaina amin’ny salady.
°7 : Mankafiza miantsena fa eny an-tsena no ahitana ny hatsaran-tarehin’ny legioma sy ny voankazo.
°8 : Aza mihinana mofo dipaina. Sakafo kely gluten ihany hohanina. Raha tena tsy maintsy dia ireo karazany mbola feno otrikaina ihany na « pain complet » ihany hohanina sady atao amin’ny fatra kely.
°9 : Mahazo mihinana ody ambavafo raha noana anelanelam-potoana. Voankazo,voan-javatra, chocolat noir, ronono vita amin’ny soja, legioma natao smoothie, zava-pisotro mafana tsy mamy na dite « thé vert » amin’ny voasarimakirana sy sakamalaho atao.
°10 Sakafo bio ihany hohanina raha azo atao. Sakafo azo antoka ny zezika nampiasaina taminy ary fantatra fa tsy nampiasana pesticide no antsoina hoe « bio ». Ireny no be otrikaina sy vitamina ary mpanala arafesina kokoa.
Ohatra sakafo iray andro :
• Sakafo maraina : Voankazo izay lany + voanjo na amndes 1 tanana + zav-pisotro mafana tsy mamy
• Sakafo atoandro : Legioma 1 lovia (crudités ¾ + masaka ¼) notondrahana menalka oliva sy ranom-boasarimakirana ary zava-maitso manitra. + voamaina misy episy na saosy voatabia ny herinandro voalohany. Ampifandimbiasina ny henamborona sy ny trondro ary ny atody ny herinandro faharoa sy fahatelo. atao 100 na 120 grama eo. Voanjazo 2 ny tsindrin-tsakafo.
• Sakafo hariva : lasopy legioma notondrahana menala oliva kely, nasiana zava-maitso manitra, voankazo manta na nomasahana 1 na 2
Orina manaraka ny fiodin’ny famataranandro ny kibo, miaina lalina tsara miainga any amin’ny kibo, manao dian-tongotra na mampihetsi-batana araka izay tratra, makaaina kao rehefa mahatsiaro vizana.